पुरस्कारभन्दा पनि आत्मसन्तुष्टिमा विश्वास गर्छु –इन्द्रनारायण चोङबाङ - Naya Online
पुरस्कारभन्दा पनि आत्मसन्तुष्टिमा विश्वास गर्छु –इन्द्रनारायण चोङबाङ
नयाँ अन्लाईन सोमवार, बैशाख २, २०७६ (April 15th, 2019 at 3:55am ) ग्लामर न्युज, फिचर, साहित्य
शिक्षित तर वेरोजगार भएपछि वैदेशिक रोजगारमा मकाउ रहेका इन्द्रनारायण चोङबाङ त्यहीबाटै गीत संगीतमा सक्रिय छन् । उनकै भनाईअनुसार पढ्न मन नलाग्ने तर परिवारको जोडबलले स्नात्तकोत्तर पूरा गरेपछि वैदेशिक रोजगारको लागि गएका हुन् । नेपाल छँदै एक कविता सङ्ग्रह निकालिसकेका इन्द्रले विदेशबाटै एक गीत सङ्ग्रहका साथै दुई एल्बम बजारमा ल्याएका छन् । अध्ययनभन्दा पनि खेल मनपराउने उनले खेलतर्फ कहिल्यै लाग्न नपाएको खिन्नता पनि रहेछ ।
वि.सं. २०३३ असोजमा हालको मैवाखोला गाउपालिका ३ कोलडाडामा भरतकुमार चोङबाङ र मधुकला माङ्देनको कोखबाट जन्मिएका हुन् इन्द्रनारायण चोङ्बाङ । गाउँकै सरस्वती प्राबी तुम्बेबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका इन्द्रले श्री मैवाखोला माबी तेम्बेबाट २०४९ सालमा एसएसली गरी महेन्द्र मोरङ बिराटनगरबाट आइए सकाएका हुन् । महेन्द्र बहुमुखी धरानबाट स्नातक तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् ।
उनले वि.सं. २०५७ कविता मादेन विवाह गरी कविन्द्र र सम्राट दुई छोराका पिता पनि बनिसकेका छन् । उनका शहिदका रगत र मेरा सपना (कविता सङ्ग्रह २०५८), माटोका गीतहरू मुटुका गीतहरू (गीत सङ्ग्रह २०६९), दुरी (एल्बम २०७०) र माटो (एल्बम २०७२) प्रकाशित छन् । र, करिब २ दर्जनजति फुटकगर गीत रेकर्ड छन् । आफ्नै स्वरमा गीत रेकर्ड पनि भएको छ । उनको बाल्यकाल, अध्ययन, साहित्यमा रुचि र वैदेशिक रोजगारबारे उनकै शब्दमा:
म बाल्यकालमा खासै पढाइमा रुचि नभएको व्यक्ति हुँ । तर घरबाट पढ्नै पर्ने बाध्यतामा परेर पढि टोपलेको मान्छे हुँ । माध्यमिक तह पनि घरकै जोरले पढेको मान्छे हुँ । क्याम्पसमा पनि पढाइमा खासै जाँगर लागेन । खेल क्षेत्र रुचिको बिषय थियो तर घरबाट बन्देज थियो ।
धरानमा बिए पढ्न थालेपछि साहित्य संगीतमा मन गएको हो । सायद जवानी यस्को प्रमुख कारण थियो । निकै कार्यक्रममा भाग लिएको थिएँ । पुरस्कार खासै पाएको छैन । पाएका सानातिना पुरस्कार भुलिसकेँ । पुरस्कारभन्दा पनि आत्मसन्तुष्टिमा विश्वास गर्छु । अर्को कुरो पुरस्कार देउ भनेर कुनै आयोजकसँग पनि गाको छुइनँ । पछिलो समय गीतप्रति लगाव छ । संगीतप्रेमी भएर हुँला तर कुनै मिसन छैन । मन शान्त बनाउन गीत लेख्छु संगीत गर्छु ।
शिक्षण पेशा छाडेर वेदेशिक रोजगारमा
विदेशिनुको प्रमुख कारण रोजगारी नै हो । नेपाल रहदा म शिक्षण पेशामा थिए । प्राइभेट जागीर सानो तलब सुन्दर भविष्यका सपना सबै मिलेर लात हानेपछि आदर्शताले तेल बेसारको काम नगरेपछि लेवर भिषामा बिदेश आएँ । आज पनि खुसी नै छु हिजो जति खुसी थिएँ । दुःखसँग हाँस्न आउंछ । सानातिना समस्या हाँसेरै टारिन्छ ।
विदेशमा परदेशीका पीडा
विदेश हिँडेपछि फुर्सदिलो समय छ । कामपछि नानाभाँती मनमा कुरो खेलाएर बस्नु या रक्सी पिएर बस्नु भन्दा सृजनामा लाग्दा राम्रो भनेर लेख्ने काम गरेको हुँ । स्वदेशमा हुँदा पनि लेख्थेँ । खासै अप्ठ्यारो छैन । मनभरि गाउँबेसी साथीभाई आफन्त समेटेर लेख्ने कोसिस गर्छु । म जस्तै परदेशीको पीडा लेख्न चाहन्छु ।